လက်တကမ်းမှ အောင်မြင်မှု – Gentleman Magazine
ကျရှုံးမှုဖြစ်စဉ်တော်တော်များများရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်တစ်ခုက ခဏတာအခက်အခဲကိုမကျော်လွှားနိုင်ပဲ အလွယ်တကူအရှုံးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမှားမျိုးကို လူတိုင်းလောက်နီးပါးက တစ်ကွေ့မဟုတ် တစ်ကွေ့မှာ ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ R.U. Darby ရဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်ဟာ ရွှေတူးရွှေကြောရှာတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ခရီးလမ်းကခက်ခဲကြမ်းတမ်းပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရွှေကို တပ်မက်တဲ့စိတ်ကို မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သီတင်းပတ်ပေါင်းများစွာ ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေတူးဖော်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ့ ရွှေကြောတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီရွှေကြောကရွှေတွေကို တူးထုတ်ဖို့အတွက် စက်ယန္တရားတွေလိုအပ် ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ သူ့ရဲ့ရွှေတွင်းကို အသာဝှက်ထားခဲ့ပြီး မွေးရပ်မြေကိုပြန်လာကာ မိသားစုဆွေမျိုး တွေနဲ့ အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေတွေထံကနေ ငွေချေးပြီး စက်ယန္တရားတွေ ၀ယ်ယူပြီး ရွှေတွင်းရှိရာကို တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဦးလေးနဲ့ အတူ Darby လည်း ရွှေတွင်းဆီကို လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုများစွာနဲ့ တူ၀၇ီးနှစ်ယောက် ရွှေတွင်းရှိရာကို ရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့ ရွှေကြောကြီးက ရှိမနေတော့ပါဘူး။ သူတို့လည်း ဇွဲမလျှော့ပဲ အနီးတ၀ိုက်ဆက်လက်တူးဖော်ရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် ရွှေကြောကိုတော့ လုံးဝမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့တွေ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ လက်လျှော့လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး နယ်ခံတစ်ယောက်ကို စက်ယန္တရားတွေကို အောက်ဈေးနဲ့ ရောင်းပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နယ်ခံက လူအတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး တွက်ချက်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်စေခဲ့ ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာရဲ့တွက်ချက်မှုတွေအရ မူလကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရွှေကြောဟာ မြေလွှာပြတ်ရွေ့ကြောကြောင့် နေရာရွေးသွားတာဖြစ်ပြီး Darby တို့ တူဝရီးနှစ်ယောက် ဆက်မတူးတော့ပဲ ရပ်လိုက်ကြတဲ့ နေရာကနေ (၃)ပေ အကွာမှာ တည်ရှိနေကြောင်း အဖြေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
နယ်ခံပုဂ္ဂိုဟ်ကတော့ ရွှေတွင်းကနေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရရှိသွားပြီး အရင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Darby တို့ကတော့ စက်ယန္တရားတွေ ၀ယ်ယူခဲ့တဲ့အကြွေးတွေကို နှစ်အတော်ကြာအောင် ပေးဆပ်လိုက်ကြရပါတယ်။ ဒီကိစ္စကြုံပြီး တဲ့နောက်မှာ Darby ဟာ သူ့အလုပ်မှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်မဆုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အသက်အာမခံရောင်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ပြီး လူတွေက မ၀ယ်ဘူးပြောတဲ့အခါတိုင်း ရွှေကြောကြီးတစ်ခုလုံးကို သုံးပေအကွာနဲ့ လက်လွှတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Darby ဟာ နှစ်စဉ် အသက်အာမခံ ဒေါ်လာတစ်သန်းဖို့ရောင်းရတဲ့ လူအနည်းငယ်ထဲမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ရွှေကြောရှာဖွေစဉ်က အလွယ်တကူအလျှော့ပေးမိတဲ့ လုပ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီး ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် အောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကရြှုံးမှုဖွဈစဉျတျောတျောမြားမြားရဲ့အဓိကအကွောငျးရငျတဈခုက ခဏတာအခကျအခဲကိုမကြျောလှားနိုငျပဲ အလှယျတကူအရှုံးပေးလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအမှားမြိုးကို လူတိုငျးလောကျနီးပါးက တဈကှမေ့ဟုတျ တဈကှမှေ့ာ ကြူးလှနျခဲ့ဖူးပါတယျ။ R.U. Darby ရဲ့ ဦးလေးတဈယောကျဟာ ရှတေူးရှကွေောရှာတဲ့ အလုပျကိုလုပျဖို့ စိတျအားထကျသနျစှာနဲ့ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ခရီးလမျးကခကျခဲကွမျးတမျးပမေယျ့ သူ့ရဲ့ ရှကေို တပျမကျတဲ့စိတျကို မဟနျ့တားနိုငျခဲ့ပါဘူး။
သီတငျးပတျပေါငျးမြားစှာ ပငျပငျပနျးပနျးရှာဖှတေူးဖျောပွီးတဲ့နောကျမှာ ပွောငျပွောငျလကျလကျနဲ့ ရှကွေောတဈခုကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒီရှကွေောကရှတှေကေို တူးထုတျဖို့အတှကျ စကျယန်တရားတှလေိုအပျ ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူဟာ သူ့ရဲ့ရှတှေငျးကို အသာဝှကျထားခဲ့ပွီး မှေးရပျမွကေိုပွနျလာကာ မိသားစုဆှမြေိုး တှနေဲ့ အိမျနီးခငျြးမိတျဆှတှေထေံကနေ ငှခြေေးပွီး စကျယန်တရားတှေ ဝယျယူပွီး ရှတှေငျးရှိရာကို တငျပို့ခဲ့ပါတယျ။ သူ့ဦးလေးနဲ့ အတူ Darby လညျး ရှတှေငျးဆီကို လိုကျပါသှားခဲ့ပါတယျ။
ပြျောရှငျဝမျးမွောကျမှုမြားစှာနဲ့ တူဝရီးနှဈယောကျ ရှတှေငျးရှိရာကို ရောကျရှိသှားခြိနျမှာတော့ ရှကွေောကွီးက ရှိမနတေော့ပါဘူး။ သူတို့လညျး ဇှဲမလြှော့ပဲ အနီးတဝိုကျဆကျလကျတူးဖျောရှာဖှခေဲ့ပမေယျ့ ရှကွေောကိုတော့ လုံးဝမတှရေ့တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့တှေ စိတျပကျြလကျပကျြနဲ့ လကျလြှော့လိုကျဖို့ ဆုံးဖွတျပွီး နယျခံတဈယောကျကို စကျယန်တရားတှကေို အောကျဈေးနဲ့ ရောငျးပဈခဲ့ကွပါတယျ။ နယျခံက လူအတဈယောကျ မဟုတျပါဘူး။ သတ်တုတှငျးအငျဂငျြနီယာတဈယောကျကို ချေါပွီး တှကျခကျြစဈဆေးမှုတှေ လုပျဆောငျစခေဲ့ ပါတယျ။ အငျဂငျြနီယာရဲ့တှကျခကျြမှုတှအေရ မူလကတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ ရှကွေောဟာ မွလှောပွတျရှကွေ့ောကွောငျ့ နရောရှေးသှားတာဖွဈပွီး Darby တို့ တူဝရီးနှဈယောကျ ဆကျမတူးတော့ပဲ ရပျလိုကျကွတဲ့ နရောကနေ (၃)ပေ အကှာမှာ တညျရှိနကွေောငျး အဖွထှေကျလာခဲ့ပါတယျ။
နယျခံပုဂ်ဂိုဟျကတော့ ရှတှေငျးကနေ ဒျေါလာသနျးပေါငျးမြားစှာရရှိသှားပွီး အရငျတှခေဲ့တဲ့ Darby တို့ကတော့ စကျယန်တရားတှေ ဝယျယူခဲ့တဲ့အကွှေးတှကေို နှဈအတျောကွာအောငျ ပေးဆပျလိုကျကွရပါတယျ။ ဒီကိစ်စကွုံပွီး တဲ့နောကျမှာ Darby ဟာ သူ့အလုပျမှာ ဘယျလိုအခကျအခဲမြိုးပဲဖွဈဖွဈ နောကျမဆုတျဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ အသကျအာမခံရောငျးတဲ့အလုပျကို လုပျကိုငျပွီး လူတှကေ မဝယျဘူးပွောတဲ့အခါတိုငျး ရှကွေောကွီးတဈခုလုံးကို သုံးပအေကှာနဲ့ လကျလှတျခဲ့ရတယျဆိုတဲ့ မခံခငျြစိတျနဲ့ ကွိုးစား လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ Darby ဟာ နှဈစဉျ အသကျအာမခံ ဒျေါလာတဈသနျးဖို့ရောငျးရတဲ့ လူအနညျးငယျထဲမှာ ပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ရှကွေောရှာဖှစေဉျက အလှယျတကူအလြှော့ပေးမိတဲ့ လုပျရပျကနသေငျခနျးစာယူပွီး ကွိုးစားခဲ့တဲ့အတှကျ အောငျမွငျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
Previous: သင့်ကောင်မလေး သင့်ကို စိတ်ကုန်သွားစေနိုင်သည့် အချက်များ
Next: ဆွဲဆောင်မှုရှိစေဖို့ သိပံ္ပနည်းကျ မဟာဗျူဟာများ